वीपी प्रतिष्ठानका एक एसोसिइट प्रोफेसर सामाजिक सञ्जाल मार्फत उपकुलपतिमाथि खनिए » PradeshReport.com
होम पेज » समाचार » वीपी प्रतिष्ठानका एक एसोसिइट प्रोफेसर सामाजिक सञ्जाल मार्फत उपकुलपतिमाथि खनिए
प्रकाशित : ९ असार २०७८ १४:२३
असार ०९, २०७८ – धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका एसोसिएट प्रोफेसर डा. प्रकाश कुमार पराजुली उपकुलपति माथि खनिएका छन ।
प्रतिष्ठानमा अख्तियारले छापा मारेपछि प्रतिष्ठानकै एक एसोसिएट प्रोफेसर डा.विष्णु पोखरेललाई कार्वाहिको चेतावनी सहित स्पष्टिकरण माँगे पछि प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरु आन्दोलित बनेका थिए । सो आन्दोलनलाई अहिले आएर नर्सिङ स्टाफ, कर्मचारि हरुको पनि साथ रहेको छ । आन्दोलन चर्की रहेको छ उता उपकुलपति कानमा तेल लगाएर काठमाण्डौको विलासितामा मस्त छन । काठमाण्डौ बसेर उनले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग पनि वार्ता गर्न आन्दोलित पक्षले अस्विकार गरेका छन ।
यसै क्रममा आन्दोलित मध्यका एक एसोसिएट प्रोफेसर डा. प्रकाश कुमार पराजुलीले फेसबुक स्टाटस मार्फत उपकुलपति प्रति आक्रोस पोखेका छन । उनले हिजो विहान ७:३५ बजे फेसबुकमा लेखेका छन गल्ती गरियो आफैले, भिसि भनेको निकै ठुलो पद हो र प्राज्ञ व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने बुझियो । नन् प्रोफेसर हरिलठ्ठक मन्दबुद्धिहरु पनि भिसि बन्न सक्छन भन्ने थाहा भएको भए त बरु आफै भिडिन्थ्यो भिसिका लागी भन्दै स्टाटस लेखेर भिसिको बौद्धिक माथि र उपकुलपतिको आचरणमाथि प्रहार गरेका छन ।
त्यसै गरेर उनले हिजो नै दिनको १२:२७ बजे उनले एक स्टाटस लेख्दै उपकुलपतिलाई कोरोना भाइरस जस्तै प्रतिष्ठान भित्रको भाइरस संज्ञ दिएका छन । उनले G.9–G.4 नाम दिँदै उपकुलपतिलाई भाइरसको संज्ञ दिएका छन । उनले दिएको भाइरसको नाम G9 को अर्थ ज्ञानेन्द्र (Gyanendra) र G4 को अर्थ गीरी (Giri) हो । उनले कोरोना भाइरस सँग तुलना गर्दै औकात भन्दा बढी भाउ पाएर होला दुइवटै भाइरस बढी नै शान देखाएर बसेका छन भन्दै उनले यस किसिमको भाइरसलाई भाउ दिनुको सट्टा लखेट्नु पर्छ भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन । त्यसै गरेर उनले उपकुलपतिलाई भिसि हराएको सुचना भन्दै समस्या देखि भागेर आफ्नो पदको दम्भ देखाएको आरोप लगाएका छन ।
हुन पनि उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गीरीको आचरण नै हिटलर शैलीको छ । सञ्चारकर्मी सँग बोल्नै मान्दैनन अनि हामि सँग सुचना नलि समाचार लेखेको भन्दै समाचारको खण्डन गर्छन । उनलाई नागरिक दवाव सञ्जालले एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएर प्रतिष्ठानको वेतिथि अन्त्य गर्ने र पुन एक हप्ता पछि छलफल गर्ने भनिए पनि उनि हप्ता दिन नवित्दै काठमाण्डौ गएका छन । किन उपकुलपति काठमाण्डौ गए त ? तपाइहरुको आन्दोलनलाई छल्न गएका हुन त ? प्रदेश रिपोर्टको यस्तो जिज्ञासामा आन्दोलित एक चिकित्सक भन्छन, उपकुलपति किन गए काठमाण्डौ यो हाम्रो चासोको विषय हैन हाम्रो मुद्दा हाम्रो लागी चासो को विषय हो । उपकुलपति अमेरिका नै गए पनि उनि चाँडो आएर हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ हाम्रो माँग पुरा गर्नु पर्छ । तर उनको यो किसिमको प्रवृतिले तपाइहरुर्ला नटेरेको र तपाइहरुलाई झारपात ठानेको हो की ? यतिको दिन सम्म उपकुलपति किन काठमाण्डौ बसे त ? भन्ने जिज्ञासामा प्रदेश रिपोर्टलाई उनले भने नपत्याएको हो हैन हामीलाई थाहा छैन । पत्याए पनि नपत्याए पनि हामि हाम्रो आन्दोलन रोक्ने वाला मा छैनौ । यदि नपत्याएकै हो भने पनि हामि हाम्रो आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै आन्दोलनलाई अझ शशक्त बनाएर अघि बढ्छौ ।
PrevPreviousसडकमा अव्यवस्थित जनावरलाइ खाना खुवाएको ३१औँ दिनको अवसरमा पुनस्र्थापना केन्द्रमा खाना खुवाइयो
Nextस्लोभाकीयामाथि सानदार जित निकाल्दै स्पेन अन्तिम १६ मा प्रवेशNext